WEPỤ ADWARE NA WEPỤ NGWá ỌRỤ NGWá ỌRỤ - N'IHI BEGINNERS - 2019
Wepụ ihe ndị a na-achọghị na Ngwaọrụ Nwepu na Junkware
Ndị ọrụ iji wepu ihe ndị a na-achọghị na nke obi ọjọọ na ihe ntanetịpụ nchọgharị bụ taa otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu n'ihi uto nke egwu dị otú ahụ, ọnụ ọgụgụ nke Malware na Adware. Ngwa Mgbapụta Junkware bụ ngwá ọrụ ndị ọzọ na-enweghị ike ịnweta nje na-enyere aka na ọnọdụ ebe Malwarebytes Anti-Malware na AdwCleaner na m na-ekwukarị anaghị arụ ọrụ. Nakwa na isiokwu a: Ngwa kachasị iwepụ malware.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Malwarebytes na-azụta ihe ndị kasị dị irè iji merie Adware na Malware: na October 2016, AdwCleaner bịara n'okpuru nku ha, na oge ụfọdụ tupu a chọpụta Ngwaọrụ Ntugharị Junkwa taa. Olileanya, ha ga-anọgide kpamkpam free, na agaghị enweta "adịchaghị" nsụgharị.
Rịba ama: A na - eji njirimara iji wepu software na obi achọghị iji chọpụta ma wepu egwu ndị ahụ antivirus na - adịghị ahụ "maka", n'ihi na ha abụghị, n'echiche nke okwu ahụ, Trojans ma ọ bụ nje: nkwụsị nke na - egosi mgbasa ozi achọghị, mmemme na - egbochi ịgbanwe ụlọ ma ọ bụ ihe nchọgharị, "nchọgharị" na ihe ndị yiri ya.
Iji Ngwudata Nwepu Junkware
Ịchọ na nhichapụ malware na JRT adịghị egosi ọrụ ọ bụla pụrụ iche n'akụkụ akụkụ nke onye ọrụ - ozugbo ịmalitere ọrụ ahụ, windo console mepee na ozi gbasara ọnọdụ eji ya na onyinye iji pịa igodo ọ bụla.
Mgbe ịpịsịrị, usoro ihe omume Junkware Removal Tool na-aga n'ihu ma rụọ ọrụ na-akpaghị aka
Aghapụtara ebe nchekwa Windows, mgbe ahụ, a na-enyocha ma gbuo ya.
Na-agba ọsọ usoro
Faịlụ na nchekwa
N'ikpeazụ, a ga-emepụta akụkọ edemede JRT.txt na malware niile ma ọ bụ mmemme achọghị.
Na ule m na laptọọpụ nchọpụta (nke m na-eṅomi ọrụ nke onye ọrụ oge niile ma na-esoteghị ihe m na - etinye) ọtụtụ egwu egwu achọpụtara, karịsịa nchekwa ya na miner cryptocurrency (nke o doro anya na e guzobere n'oge ụfọdụ ndị ọzọ anwale) otu ndọtị ọjọọ, ọtụtụ ntinye ndekọ nke na-egbochi ọrụ nkịtị nke Internet Explorer, ha niile ehichapụla.
Ọ bụrụ na ọ nwụpụsịrị egwu ahụ site na mmemme ị nwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ weere na ọ gaghị adị mma ụfọdụ n'ime mmemme ị na-eji (nke yiri ka ụfọdụ ngwanrọ sitere na ọrụ redio a maara nke ọma), ịnwere ike iji ebe weghachite nke a na-emepụta n'oge na-eme ihe omume ahụ. Nkọwa: Windows 10 Ihe Ndoghachite (otu dị na nsụgharị OS gara aga).
Mgbe o wepụsịrị egwu ndị ahụ, dịka akọwara n'elu, arụre m ndebanye aha AdwCleaner (ọkachamma mwepụ ngwá ọrụ Adware).
N'ihi nke a, a chọtara ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-achọghị, tinyere nchekwa nke ihe nchọgharị dubious na mmezigharị ntanetị. N'otu oge ahụ, nke a abụghị maka ịdị irè nke JRT, mana maka eziokwu ahụ ọbụlagodi na nsogbu ahụ (dịka ọmụmaatụ, mgbasa ozi na nchọgharị) edozila, ị nwere ike ịlele ya na ọrụ ọzọ.
Otu ihe ọzọ: mmemme na-esiwanye, mmemme nwere ike igbochi ọrụ nke ụlọ ọrụ kachasị ewu ewu iji merie ha, ya bụ Malwarebytes Anti-Malware na AdwCleaner. Ọ bụrụ na, mgbe ị na-ebu ha, ha ga-apụ ozugbo ma ọ bụ enweghị ike ịmalite, M na-akwado ịnwale Ngwá Ọrụ Nwepu Junkware.
Ịnwere ike ibudata JRT n'efu site na saịtị ọrụ ahụ (melite 2018: ụlọ ọrụ ga-akwụsị na-akwado JRT n'afọ a): //ru.malwarebytes.com/junkwareremovaltool/.